Dowladda Soomaaliya oo gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dacwad ka dhan ah Dowladda Kenya waxaa ay u gudbisay Ra’iisul Wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduuk oo sidoo kale ah madaxa xiliggan ee Urur gobolleedka IGAD.
Qoraal lagu daabacay Barta Twitter-ka Wasaarradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa looga hadlay jawaab dowladda Soomaaliya uga timid IGAD , taas oo ah in 20-ka Bishaan December, dalka Jabuuti lagu qaban doono kulan looga hadlayo khilaafka Kenya & Soomaaliya.
Kulanka oo uu soo qaban qaabiyeen Urur Goboleedka IGAD ayaa diirada lagu saari doonaa xalka gaarista khilaafka xoogeystay ee Diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya & Kenya kaas oo aad looga dareemay wadamada Gobolka.
Maalinba Maalinta ka dambeeysa ayaa waxaa sii xoogeysanayay khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya & Kenya, waxaana uu sii xoogeysatay markii dowladda Soomaaliya ay u yeertay safarkii ka joogay Kenya sidoo kalena ay dalka ka saartay safiirkii Kenya.
Shirkaan looga hadlayo khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya & Kenya oo uu soo qaban qaabiayay urur Goboleedka IGAD ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xili Magaalada Nairobi uu booqasho ku joogo Madaxweynaha Soomaaliland, isla markaana Maanta la filayo in uu la kulmao Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Previous articleKulan u socdo Madaxweyne Farmaajo iyo Xildhibaano ka tirsan Galmudug
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo ka baaqday Xaflad sagootin ah oo loo sameeyay & xog laga helay